Olee otú Mepụta a Nkpuchi si a Ọdịdị na Mgbe mmetụta
Ịmepụta na iji masks bụ ihe gbara akụkụ nke na-na kacha mma si Mgbe mmetụta, n'ebe a anyị ga-ele anya na usoro maka eke masks si udi menu, nke bụ ihe kasị n'ụzọ kwụ ọtọ ụzọ mejuputa a nkpuchi.
Ka malitere mbụ anyị ike ọhụrụ mejupụtara, m kere a obere 320x240 mkpebi mejupụtara n'ihi nzube a, na kwukwara a ederede oyi akwa na nanị dere otu okwu 'nkpuchi' na-acha odo odo.
Nke a bụ kpere mee ihe atụ nke Usoro, i nwere ike iji a nkpuchi na ụdị ọ bụla nke oyi akwa na ị chọrọ gị ọrụ, dị ka anyị ga-atụle e mesịrị na.
2. udi ngwá ọrụ
Ọ dị mkpa ịghọta otú udi ngwá ọrụ na-arụ ọrụ maka irè masking, na ngwá ọrụ bụ sọrọ nzube na dị ka ndị dị otú ahụ, ọ dị mkpa na-eso ziri ezi nzọụkwụ na-mmetụta ị chọrọ.
Akpa oyi, na ngwá ọrụ ya onwe ya bụ n'elu menu, ma ọ bụ shortcut 'Q', dobe ala menu-enye gị ohere ịhọrọ site na a dịgasị iche iche nke shapes dị ka anyị pụrụ ịhụ n'ebe a.
I nwekwara ike okirikiri site na shapes site na iji Q shortcut.
Iji udi ngwá ọrụ ga-ike a nkpuchi naanị ma ọ bụrụ na oyi akwa na ị chọrọ ikpuchi họrọ na usoro iheomume, ọ bụrụ na ihe ọ bụla họrọ, na ngwá ọrụ ga-ike a udi oyi akwa. E nwere ọtụtụ ihe ị ga-achọ ime nke a, ma n'ihi na a na oru ngo na anyị na-achọ na masking kpọmkwem, na otú anyị hụ anyị ederede oyi akwa 'Nkpuchi' a pụta ìhè, họrọ rektangulu udi ngwá ọrụ, ma na-abịaru a nkpuchi gburugburu ederede, nke apụta na ihe anyị na-ahụ na nke a screenshot.
Ọ dị mkpa iburu n'obi na ọ bụrụ na 'abịazi nọdụ' igbe na-ticked ọzọ na nkpuchi akụrụngwa nke usoro iheomume, nkpuchi odịbe ihe niile ma ihe na-ẹdude n'ime nkpuchi onwe ya. Abịazi nọdụ ọrụ na agbara, ihe niile bụ anya ma ihe dị n'ime nkpuchi.
Ebe a bụ ihe na-eme ma ọ bụrụ na anyị ịdọrọ nkpuchi anya ederede iji gosi otú a na-arụ ọrụ.
Ederede bụ ka e nwere, ọ bụghị kpaliri na niile, nkpuchi dị nnọọ odịbe akụkụ nke ya dị ka ọ na-akpali gburugburu. Nke a bụ ntọala nke creativity n'ime Mgbe mmetụta, ma anyị nwere ugbu a anyị ederede na anyị nkpuchi, gịnị ka anyị pụrụ n'ezie eme na ya?
3. agbakwụnye Movement
Dị ka ọtụtụ ihe Mgbe mmetụta, na-eke ije iji masks dabeere gburugburu keyframe ọrụ. Anyị setịpụrụ anyị keyframes na usoro iheomume, na mgbe mmetụta eme ihe n'etiti maka anyị. Nke a na-enye ohere ka anyị na ike ụfọdụ na-akpali mmetụta na nnọọ mfe akụkụ anọ nkpuchi na otu okwu nke ederede.
Anyị na-amalite anya na anyị mbụ keyframe. N'ime ederede oyi akwa na usoro iheomume anyị ahọrọ ndị Nkpuchi wee pịa elekere nkwụsị na-esote nkpuchi Path ike anyị mbụ keyframe ná mmalite nke a clip.
Ugbu a anyị nwere anyị mmalite ọnọdụ anyị nwere ike ịmepụta anyị ije ndị ịka oge cursor na mgbe ahụ n'ịgbanwe nkpuchi maka ọzọ keyframe. Dị ka n'okpuru gbara-egosi, njikwa maka nkpuchi ịgbatị ihe karịrị nanị na-akpụ akpụ ya, i nwere ike ịgbanwe opacity, nku nkpuchi ngwakọta ya, ọbụna ịgbanwe ya udi dị ka akụkụ nke ije.
Na nke a bụ ezie na, m nanị merela agadi usoro iheomume 5 sekọnd na shrunk nkpuchi ka otu akuku, na kere nke abụọ keyframe.
Na-esote keyframe na-kere na n'otu ụzọ ahụ, lee, m nwere merela agadi oge cursor ma kwaga nkpuchi elu aka nri nke ederede.
Ya mere, ihe anyị nwere nnọọ bụ nkpuchi amalite ekpughe dum okwu, mgbe ahụ, shrinking n'ime otu akuku, mgbe ahụ, na-akpụ akpụ n'elu ekpe, m ga-ugbu a ike abụọ ọzọ keyframes ịkwaga ya gafee n'elu nri nke ederede, na ikpeazụ na ala n'aka nri.
Ugbu a, anyị nwere usoro ebe anyị na-amalite na-ahụ dum okwu 'nkpuchi', nke ahụ kpamkpam dị ka nkpuchi shrinks ala, mgbe ahụ, akụkụ nke okwu na-ekpughe dị ka nkpuchi aga gburugburu ederede.
Akụkụ ikpeazụ bụ nanị mụbaa nkpuchi-ekpe na-ekpughe dum okwu ọzọ.
Nke a bụ nke ikpeazụ keyframe n'ihi na nke a ije na completes nta anyị na-aga aga.
Ebe o doro anya na, dị a dị mfe usoro na-agaghị emeri ọ bụla kwuo, ọ na-atụ ndị bụ isi nzọụkwụ nke emeghari masks kere si udi ngwá ọrụ na m n'aka na i nwere ike na-amalite ịhụ nke ahụ, ohere, tinye na ije na oyi akwa n'okpuru nkpuchi ma ị nwere ike na-emepụta ụfọdụ ịtụnanya mmetụta nnọọ ngwa ngwa n'ezie. Otú ọ dị, dị ka anyị hụworo, e nwere ihe ndị ọzọ nhọrọ ka ịhazie nkpuchi mmetụta mere ugbu a ọ bụ oge anya na ndị a na a obere zuru ezu dị ka mma.
4. Otutu Masks
Ị nwere ike nwere ihe karịrị otu nkpuchi on a oyi akwa, na i nwere ike ịdị iche iche otú ha emekọ ike ọtụtụ mmetụta, iji gosi nke a m kere ọhụrụ mejupụtara, na kwukwara abụọ siri ike n'ígwé iji Layer> New> Solid, akpa oyi akwa bụ na-egbuke egbuke red , na nke abụọ oyi akwa acha anụnụ anụnụ. Mgbe ahụ na iji udi ngwá ọrụ na-acha anụnụ anụnụ oyi akwa họrọ, m kere 3 iche iche akụkụ anọ masks dị ka anyị pụrụ ịhụ n'ebe a.
Nke a na-egosi niile atọ masks na ndabara ụdị, m overlapped ha ka ha na-egosi otú i nwere ike ịgbanwe dị iche iche nkpuchi ụdịdị maka dị iche iche mmetụta. Ndabara na-'Tinye', dị ka nwere ike hụrụ na-ekpe nke onye ọ bụla nkpuchi na usoro iheomume panel. Anyị nwere ike ịgbanwe nke a ka asaa dị iche iche ụdịdị, dị ka anyị pụrụ ịhụ n'ebe a.
Na-agbanwe agbanwe nkpuchi 2, na nke etiti, ka 'wepụ' na-ekpughe nke a n'ihi
Ka anyị pụrụ ịhụ, ọ negates nkpuchi na bụ n'okpuru ya, ma ọ dịghị ihe utịp ke onye na-n'elu ya.
Na-agbanwe agbanwe na-irutu inverts nkpuchi ọ overlaps iche si n'ógbè nke nrutu, na n'ikpeazụ
Isetịpụ ya dị ka onye ọ bụla nnoo disables nkpuchi.
Ndị a 4 bụ isi ụdịdị a ga-eji na nkpuchi arụ ọrụ ahụ, ndị ọzọ nwere ike ha nwaanyị, sorokwa ha bụ ụzọ kasị mma ịghọta mmetụta ha n'ọnọdụ dịgasị iche iche.
Masking iche bụ isi ụlọ ngọngọ nke ọtụtụ usoro na-eji na Mgbe mmetụta ike ikpọ mmetụta, na ịghọta ihe ndị workflow na ohere ke ukot larịị bụ nzọụkwụ dị mkpa na iji zuru ókè nke Mgbe mmetụta, ọ bụ ezie na anyị dị mfe ije bụ nnọọ ihe a isi clip, ọ atụmatụ ndị ahụ fundamentals ngagharị na nke nkpuchi ukpụhọde na akụkụ nile nke masking achọ. Ebe ọtụtụ na-agbalị na-awụlikwa elu na na miri ọgwụgwụ na ndị niile elu usoro, ọ dị mkpa ka nwere ezigbo nghọta nke na-apụtaghị ìhè Filiks na otú ha na-emekọ ịga nke ọma ke ogologo okwu.
Ekiri ihe a Video Tutorial:
Olee otú Mee a kinetic Typography Video na Mgbe mmetụta
Olee otú soro Motion na Adobe Mgbe mmetụta
Olee otú iji tọghata MTS ka ProRes
Olee otú mbubata MTS ka Adobe Premiere (CS3 / CS4 / CS5 / CS6 gụnyere)
Olee otú iji tọghata Torrent ka AVI
MKV jikota: Olee ka jikota MKV Video Files na-enweghị Abụọ
Olee otú iji tọghata MXF ka MP4
Olee otú iji tọghata na Ọkụ BitComet / FrostWire Movies ka DVD
> Resource> Video> Olee otú Mepụta a Nkpuchi si a Ọdịdị na Mgbe mmetụta